Ciidamada Masar oo xabsiga dhigay dad lagu eedeyay inay ka dambeeyaan dibadbaxyada – SBC
Ciidamada Masar oo xabsiga dhigay dad lagu eedeyay inay ka dambeeyaan dibadbaxyada
Golaha meleteriga ee Dalka Masar ka taliya ayaa sheegay inay maxkamad geynayaan 43 qof oo ay ku jiraan mareykan iyo ajanib kale kuwaasi oo lagu eedeynayo inay maalgalinayaan banaanbaxyada ka socda dalkaasi.
Ciidamda Booliiska ee Masar waxaa si xoog ah waxay ku galeen xafiisyada ururada caalamiga ah ee ka shaqeeya dalkaasi kuwaasi oo xabsiga loo taxaabay
Dhinaca kale ciidamada amaanka ayaa safaro ay masar kaga baxayeen qaar ka mid ah ururadaas xanibay iyaga oo ku eedeyay inay yihiin fidno wadayal.
Wararka ugu danbeeyay ee laga helayo wadanka mAsar ayaa ku waramaya in dadka la qabtay oo tiradoodu gaareyso 43 qof ay 19 ka mid ah yihiin Mareykan kuwaasi oo uu ku jiro wiil uu dhalay xoghayaha Socdaalka ee Mareykanka RAY LAHOOD
Dowlada Mareykanka ayaa ka hadashay Amuurtan afhayeenad u hadashay Mareykanka oo lagu magacaabo Victoria Nuland waxayna ka digtay falka ay ku kacayaan ciidamada amaanka ee masar iyada oo ugu baaqday inay Dowlada Masar tixgeliso Xuquuqda Ururada gaarka loo leeyahay.
Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in uu uga baahan yahay Xukuumada Masar inay si cad u qeexdo sababta dhabta ee ka danbaysay in dhacdadan oo kale ay dhacdo.
Qabqabashada Shaqalaha ururada ee Dalka masar ayaa ku soo beegantay xilli maalintii afaraad ay dibad baxyo waaweyn ka soconayaan wadooyinka Masar kuwaasi oo ka careysan dhacdadii ka dhacday Garoonka Kubada ee PORT SACIID